राष्ट्रिय युवा संघले भ्याक्सिन स्वयंसेवक खटाउने
२१ जेठ, कास्की । राष्ट्रीय युवा संघ नेपाललले कोभिड भ्याक्सिन सहजताका लागि भ्याक्सिन स्वयमसेवक परिचालन गर्ने भएको छ । संघको गण्डकी प्रदेश कमिटीले विहिबार पोखरामा आयोजना गरेको स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
उन्ले तीन महिना भित्र हरेक नागरिकलाई खोप सेवा उप्लब्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्दताको स्वागत गर्दै धन्यबाद समेत ब्यक्त गरे । सरकारको उक्त खोप अभियानलाई सजह तथा प्रभाबकारी बनाउन टोल–टोल तहसम्म हजारौ स्वयमसेवक परिचालन गर्ने उनले बताए ।
नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमणसँगै यसको नियन्त्रण, रोकथाम, राहत तथा उद्दारमा देशब्यापी रुपमा आफ्नो संगठन र हज्जरौ नेता कार्यकर्ता परिचालित रहेको उनले दाबी गरेका छन् । संघका गण्डकी प्रदेश कमिटी प्रमुख महेन्द्र गुरुङको अगुवाई र पहलमा उक्त सामाग्री गण्डकी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका उप कुलपती डा. डुक बहादुर छेत्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा ५० थान अक्सिजन सिलिन्डर, पीपीई, मास्क, ग्लोभ्स आदि गरी रु १० लाख रकम बाराबरको सामग्री हस्तान्तरण गरिएको आयोजकले बताएका छन् ।
आँप खानुका पाँच फाइदाहरु ?
गायक माझाघरेको ‘गाइने दाई’ सार्वजनिक [भिडियाे]
सुस्त मनस्थिती भएकी युवतीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई पक्राउ
काठमाडौं उपत्यकामा सोमबार थप २२४ जना कोरोना पुष्टि
मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा दुईजना पक्राउ